Ịdị njikere maka ọdachi ndị na -emere onwe ha: nke mbụ na nke na -eso
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Ịdị njikere maka ọdachi ndị na -emere onwe ha: nke mbụ na nke na -eso
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
N'afọ gara aga, 2020, abụghị naanị afọ mbụ nke oria ojoo COVID-19, mana ọ hụkwara ịrị elu nke nnukwu ebili mmiri na ọdachi ndị ọzọ na-emere onwe ha dịka ọkụ ọgbụgba n'okirikiri ụwa.
Afọ 2021 kụziiri anyị ọzọ na ihe nwere ike ịka njọ. Na United States, otu ajọ ifufe nke kacha njọ n'ụwa bibiri New Orleans na ọtụtụ obodo ndị njem dị n'akụkụ Ọwara Oké Osimiri Gulf.
N'ebe ọdịda anyanwụ, ọkụ ọhịa mechiri akụkụ ọdọ mmiri Tahoe a ma ama n'ụwa.
Akụkụ ndị ọzọ nke ụwa tara ahụhụ Na Europe Gris hụrụ oge ọkụ kacha njọ n'oké ọhịa, na ọtụtụ mba Europe nwere nnukwu idei mmiri.
Ihe omume ihu igwe ndị a kwesịrị ịbụ ịkpọte onye ọ bụla nọ na njem njem. Ụdị nne emeela ka o doo anya nke ukwuu na njem na njem nlegharị anya bụ ụlọ ọrụ na -emebi emebi. Ọ bụ ụlọ ọrụ na -adaberekarị na ihu igwe.
Ọtụtụ mgbe, akụnụba njem na uru na -esite n'aka ihe ndị sitere n'okike. Dịka ọmụmaatụ, Central America na Caribbean na -abụkarị ebere nke oge ajọ ifufe. Na mpaghara Pacific, nnukwu oke ifufe a na -ebute oke osimiri, nke a na -akpọkarị ifufe, na -egbukwa oke. N'akụkụ ndị ọzọ nke okwu a, enwere ide mmiri na idei mmiri, ala ọma jijiji na ebili mmiri na ihe ndị a na-akpọ ọdachi nwere ike imebi ụlọ ọrụ njem. Mgbe ọdachi na -emere onwe ya gasịrị maka ọtụtụ ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya, mgbake na -eji nwayọ nwayọ yana azụmaahịa na -eche ihu enweghị ego na ndị mmadụ na -efunahụ ọrụ. N'ihi oria ojoo COVID-19, ọtụtụ azụmaahịa enweghị ike karịa ka ọ dị na mbụ iji gbakee ngwa ngwa site na ọdachi emere. Ọ bụ ihe nwute, anyị enweghị ike ịchịkwa ihu igwe ma ọ bụ ọnọdụ ihu igwe, mana ọ bụ ezigbo echiche ịkwadebe maka ala ọma jijiji, oke ebili mmiri na ajọ ifufe/ajọ ifufe ma ọ bụ ọkụ ọhịa tupu ha emee.
Iji nyere gị aka ịkwadebe m na -enye aro ndị a.
-Tụpụta atụmatụ tupu ọdachi emee. Ichere ruo mgbe ajọ ifufe ga -ada ịmalite ime ihe. Zụlite atụmatụ tupu ọnọdụ mberede. Atụmatụ a kwesịrị inwe ọtụtụ akụkụ ma gụnyekwa ilekọta ndị nwere ike imerụ ahụ ma ọ bụ na-arịa ọrịa n'oge ọdachi ahụ, chọta ebe obibi maka ndị ọbịa, chọpụta onye nọ na ọ gaghị anọ na họtel, imepụta ebe nkwukọrịta.
-Tụgharịa maka atụmatụ azụmaahịa mgbake na atụmatụ ịre ahịa tupu ọdachi adaa. Ozugbo ị nọ n'etiti ọdachi na -emere onwe gị, ị ga -eji ọrụ n'aka nke ukwuu ịzụlite olulu mmiri n'oge atụmatụ mgbake. Wepụta oge mee atụmatụ mgbe ihe adịghị ọgba aghara na ị nwere ndidi na oge iji soro ndị ọzọ na -emekọrịta ihe dịka ngalaba mgbanyụ ọkụ, ngalaba ndị uwe ojii, ndị ọrụ ahụike na ndị ọkachamara na njikwa ihe mberede. Mata ndị a n'aha ma hụ na ha ma onye ị bụ.
-Mepụta ezigbo ọrụ mmekọrịta n'etiti azụmaahịa nkeonwe na ụlọ ọrụ gọọmentị. Tupu ọdachi emee, jide n'aka na ị mara aha ndị ọrụ gọọmentị nke ọ ga -adị mkpa ka ị gakwuru. Soro ndị a tụgharịa atụmatụ gị wee nweta ntinye ha tupu nsogbu ahụ.
-Echefula na ọdachi na -abụkarị ohere maka mpụ. Gbaa mbọ hụ na ngalaba ndị uwe ojii so na atụmatụ ọdachi, ọ bụghị naanị site na ndị mmanye iwu kamakwa site na mmekọrịta mmekọrịta ọha na mgbake akụ na ụba. Ihe ngalaba ndị uwe ojii gị na -ekwu yana otu o si eme ndị ọbịa nwere ike imetụta mgbake gị na ụlọ ọrụ njem obodo maka afọ na -abịa.
-Zụlite ezigbo nkwukọrịta n'etiti ụlọ ọrụ na -aza ajụjụ mbụ. Ọtụtụ ndị ọkachamara na -ahụ maka njem nlegharị anya na -eche na enwere ezigbo ọrụ mmekọrịta n'etiti gọọmentị etiti, steeti, mpaghara ma ọ bụ ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọdachi. Ọtụtụ mgbe, nke a anaghị adị. Imekọ ihe ọnụ na -egosi adịghị mma na azụmahịa njem ma ọ bụ obodo gị. Dịka ọmụmaatụ, Ọzọkwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii anaghị azụ ọzụzụ maka ime njem nlegharị anya, ha amaghịkwa otu esi edozi mkpa pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ndị njem n'oge nsogbu.
-Mepụta usoro maka ịza ozi nkewa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnọdụ mberede, ụlọ oriri na nkwari akụ ọ ga -arụkọ ọrụ na ikwe ka ewepụta aha ndị ọbịa? Ọ bụrụ otú ahụ, n'ọnọdụ ndị dị a ?aa? Kedu mgbe ekwesịrị ka ewepụta ndekọ ahụike yana kedu ọrụ dịịrị ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya gbasara nzuzo na okwu ahụike ọha?
-Nwepụta usoro mkpochapụ nche. N'oge ọdachi, ọ nwere ike ịdị mkpa ka iwepụ ụdị iwu ọ bụla. Ozugbo ọdachi ahụ mere, oge agafeela ịmalite idozi okwu gbasara iwu. Mepụta ndepụta ugbu a wee nweta mkpochapụ dị mkpa n'oge oge udo dị. N'otu aka ahụ, soro ndị ahụike ọha gị gafee amụma ga -adị ma ọ bụrụ na ekwesịrị itinye amụma nke nkewa.
-N'ụwa a na -efe efe na -aga n'ihu, ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya imepe amụma ahụike ọha nke ndị ọbịa wee kpọsaa ha. N'ihe banyere idei mmiri, ala ọma jijiji ma ọ bụ ọdachi ndị ọzọ na -emere onwe ha, ụdị nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite. Ndị ọbịa nwere ike ị lostụ ọgwụ na enweghị ike nweta ihe nnọchi anya, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ha agaghị achọ ka nsogbu ahụike ụfọdụ bụrụ akụkụ nke ndekọ ọha. Ndị ọbịa ga-enwe oke nchegbu karịa ka a ga-asị na ha nọ n'ụlọ ma anyị nwere ike ịtụ anya ịhụ ọkwa dị ukwuu nke nsogbu ahụike butere nrụgide.
-Mara ma ọ bụ nwee atụmatụ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ njem gị na-ekpuchi mpaghara ma ọ bụ ọtụtụ ikike. Mgbe ọ bụla enwere ike, mepee koodu omume na mmekọrịta ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ebe mgbaba mberede, na ụlọ ọrụ enyemaka ndị ọzọ na -agafe obodo, ógbè, ógbè ma ọ bụ steeti.
-Gbaa mbọ hụ na ị nwere ezigbo ekwentị efu ma ọ bụ ọrụ ịntanetị ma kwupụta ebe ndị ọbịa nwere ike ịga were ọrụ ndị a ma ọ bụrụ na ọkụ agbanyụ. Ndị ọbịa ga -achọ ịkpọpụta na ndị ha hụrụ n'anya ga -achọ ịkpọ ha. Ozugbo o kwere omume, guzobe ụfọdụ ụdị nkwukọrịta efu. Ndị ọbịa agaghị echefu omume ile ọbịa a ma ọlị.
-Bido mmemme mgbake njem ogologo oge ozugbo. Mmemme ndị a ga-eme ogologo oge kwesịrị ịkarị karịa ịre ahịa mpaghara ma ọ bụ ịnye ọnụ ahịa dị ala. Usoro ihe omume a kwesịkwara ịgụnye ihe ndị dị ka isoro ndị ọkachamara ahụike uche na -arụkọ ọrụ na idobe ebe nkwado maka ndị ọbịa bụ ndị lanarịrị. Mgbe onye ọbịa ahụ hapụrụ mpaghara emetụtara, ọ ga -aga n'ihu na -ata ahụhụ site na ọdachi na -emere onwe ya. Nweta aha, adreesị ozi-e na akara ekwentị wee gbaa mbọ hụ na ndị ọbịa gị nwetara oku na-esochi ya. Oku ndị a ekwesịghị ire ihe ọ bụla mana naanị mee ka ndị ọbịa mara na ụlọ ọrụ gị na -eche banyere ha.
Onye edemede, Dr. Peter E. Tarlow, bụ onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa na -eduga ndị Njem Nleta Dị Mma omume.